Kitra afrikanina : tsy nentin’ny Cnaps Sport i Jimmy Simouri | NewsMada
Nanainga omaly nihazo an’i Kenya ny delegasion’ny Cnaps Sport, eo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Mpilalao 22, ny ao anatin’ny ekipa. Tsy anisan’ireo hiatrika ity fihaonana ity i Jimmy Simouri. Antony nanajanonana azy ny tsy fahalavorarian’ny toe-batany, araka ny fantatra.
Ankoatra izay, ao avokoa ireo mpilalao rehetra nahalalana ity ekipa tompondakan’i Madagasikara ity, miaraka amin’ireo mpilalao roa lahy nantsoina hanatevina ny Cnaps Sport : i Lanto sy Lucien. “Tsy ekipa vaovao amin’ny mpilalaony, ny Gor Mahia satria efa nihaona taminay, herintaona toy izao. Ny zavatra tsy fantatro kosa ny mety ho fiovan’ny mpilalao mandrafitra azy. Na izany aza, tsy hiaro tena fa hiezaka hanafika sy hampiditra baolina, amin’ity lalao mandroso ity, izahay”, hoy i Hery Be, mpanazatran’ny Cnaps Sport.
Ankoatra izay, ny andron’io asabotsy io ihany koa no hiatrika ny Harare FC avy any Zimbaboe, ny AS Adema, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika. Fihaonana, mandroso, hatao ao amin’ny kianjan’i Harare.
Ireo mpilalao 22 :
Mpiandry tsatoby : Ando, Leda
Vodilaharana : Olivier, Pierralit, Jean-Bà, Toby, Tahiana, Feno, Lanto, Ando, Romuald
Irakiraka : Rija, Mika, Rado, Rinjala, Njiva, Lalaina, Eric, Tojo Be
Lohalaharana : Nônô, Lucien, Niasex